Booliska Turkiga oo qabtay Qof looga shakiyay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab – Banaadir Times
Booliska Turkiga oo qabtay Qof looga shakiyay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab
By banaadir 24th February 2021 94 No comment
Qof lagu tuhunsan yahay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab ayaa maanta oo Arbaco ah lagu xiray magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga, sida ay shaacisay Wakaaladda Wararka ee Anadolu, oo soo xigatay ilo wareedyo amni.
Ruuxa la qabtay, oo la ogaaday in uu ka howl-gali jiray Kenya, ayaa lagu qabtay howl-gal ay iska kaasadeen booliska Turkiga iyo hayadda sirdoonka dalkaas (MIT).
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii warqad lagu soo xirayo qofkaas laga soo qaatay maxkamadda. La tuhunsanaha ayaa heysta dhalashada dalalka Jarmarlka iyo Talyaaniga, waxaana magaciisa lagu soo koobay A.B. oo kaliya.
Al-Sabaab oo fadhigeedu yahay ayaa ah urur gacan saar la leh shabakadda Al-Qaacidda, waxayna weerarro badan ka fuliyeen Soomaaliya iyo dalal kale oo daris la ah, sida Kenya oo xad la wadaagta Soomaaliya.
Dowladda oo soo bandhigtay Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay
Duqeyn ka dhacday Jubbada Hoose & khasaaro ka dhashay
Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Nabadsugida oo lagu diley Muqdisho
By banaadir 24th July 2018
Faah faahin qaraxa ka dhacay Muqdisho & Booliska oo ka hadlay
By banaadir 23rd February 2021
Heshiiska Cabdirashiid Janan Uu La Galay Dowladda Federaalka Oo La Shaaciyay
By banaadir 24th March 2021